Nezvedu - hannari-shopu
Chii chinonzi hannari?
Kubva zvatakatangisa kambani yedu mu2013, tanga tichitengesa mabhegi anoshandiswa senge CHANEL, LOUIS VUITTON, zvichingodaro.
Isu tiri vechipiri-ruoko mutengesi unobvumidzwa neJapan National Public Safety Commission.
Hurumende yeJapan inoda kuti vese vatengesi vemaoko vechipiri vave neiyi rezinesi kudzivirira hunyengeri. Kana mumwe munhu muJapan akaitengesa asina kutora rezinesi, zvinova mhosva.
Yedu yebhizinesi mutemo ndeyekuita kuti mutengi wedu afare.
Takatengesa zviuru zvemachiratidzo echokwadi CHANEL mumakore matanhatu apfuura.
Vazhinji vatengi vakagamuchira magora akanaka kubva kwatiri nekukurumidza uye zvakachengeteka.
Iwe une hanya here nezvevamwe muridzi akabata mabhegi akashandiswa? Ndiani aunza mabhegi kupi? Hatigone kubata iro ruzivo nekuti tinotenga mabhegi kubva kumusika wemutengesi. Asi iwe haufanire kuzviita usina kugadzikana zvachose nekuda kwekutenga kubva kwatiri. Isu tinouraya hutachiona uye hwakashata hwemabhegi ese nekushandisa yakakodzera uye yakachengeteka ozoni jenareta kwenguva pfupi kuitira kuti iwe uve nyore uye ugadzikane paunogamuchira.
Kana uchida, ndapota ona zvedu peji rekupindura kubva kumutengi.
Kana uine chero mibvunzo, ndapota inzwa wakasununguka kuti kumbira us